Mogadishu Journal » 2019 » February » 4
Mjournal :-Safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa shaacisay xog ay heleen sirdoonkooda, taasi oo ah in la maleegayo weeraro argagaixiso ay ka dhacaan Guud ahaan dalkaasi Kenya Gaar ahaan Magaalada Nairobi. Safaarada ayaa muwaadininta u dhashay...
FT: Roma Iyo Milan oo Isku Garbo dhacay
Ac Milan Ayaa ciyaarta Ku Bilaawday Si Kulul iyagoo Diyaar u ahaa in Ay Guul Kula Laabtaan Maagalada Milan. As Roma Iyagana waxaa Ka Go’need in ay Natiijada xakameeyaan. Daqiiqadii 24-aad Pietek ayaa Bilaaway Bandhiga goolasha asagoo 0-1 ay Milan Ku Gacan Sareeso. Qeebti Hore...
Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay dilka maareyaha dekedda Boosaaso Paul Anthony
Mjournal :-Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa goor dhow sheegay Puntland inay qaadeyso tallaabo jawaab u ah dilka maareyaha dekedda Boosaaso ee shirkadda P&O Ports ,Paul Anthony Fermosa. Madaxweyne Deni, ayaa tacsi u direy qoyska maareyaha geeryooday iyo...
Daacish-ta Soomaaliya oo shaaciyay geerida Muwaadin Itoobiyaan
Mjournal :-Kooxda isku magacawday Dowladda Islaamiga ama Daacish ayaa shaacisay geerida Muwaadin Itoobiyaan ka mid ahaa dagaalamayaashooda ku sugan Soomaaliya. Abuu Zubeyr Al-xabashi ayaa bishii December ee sanadkii 2017 ka soo muuqday muuqaal Kooxdu baahisay oo loogu habjabayay...
Mjournal :-Faah faahin ayaa ka soo baxaya gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo goor dhow ka dhacay agagaarka Suuqa Ganacsiga ee Muqdisho Mall ee degmada Xamar Weyne. Qaraxa ayaa ka dhacay Wadada hor marta Muqdisho Mall iyo Baar Italia ee degmada Xamar weyne, gaar ahaan...
Nin Hubeysan oo toogtay Madaxii Shirkadda DP World ee Dekeda Boosaaso
Mjournal :-Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in nin hubeysan uu saaka toogtay Madaxii Mashruuca Shirkadda DP World ee Dekeda Boosaaso. Ninka hubeysan oo aan la aqoonsan ayaa la sheegayaa in isna goobta lagu dilay, iyadoo Isbitaal loola cararay Madaxii Shirkadda...
Turkiga oo looga digay ganacsiga dahabka
Mjournal :-Xukuumadda Turkiga ayaa wajahaysa cadaadis horleh oo ah inay joojiso dahabka ay ka iibsanayso dalka Venezuela. Ilo wareed ah diblomaasi sare oo reer Galbeed ah ayaa BBC-da u sheegay in Turkiga uu ka mid yahay dalalka walaaca laga qabo in xiriir ganacsi la sameyaan...
Taliska ciidamada xoogga dalka oo ku dhawaaqay howlgal ballaaran
Mjournal :-Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Daahir Aadan Cilmi Indhoqarshe ayaa ku dhawaaqay howlgal Ballaaran oo dhawaan ka bilaaban doona guud ahaan Soomaaliya. Taliyaha ayaa sheegay in u jeedada ugu weyn ee howlgalkaan ay tahay in ay gacanta ku dhiggaan...